NISA oo caqabad ku ah sharciga la dagaalanka argagaxisadda | KEYDMEDIA ONLINE
NISA oo caqabad ku ah sharciga la dagaalanka argagaxisadda
Fahad Yaasiiin ayaa ku buuxiyay hay'adda Nabad Sugida xubno Al-Shabaab, waxayna ka dhigay NISA meel argagaxisadda ay abaabusho dilalka iyo qaraxyada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Cabdirisaaq Cumar Maxamed, Wasirkii hore ee amniga dowladdii Xasan Sheekh ayaa ku eedeeyay Fahad Yaasiin, taliyaha NISA inuu caqabad ku noqday ansixinta sharciga la dagaalanka argagaxisadda, oo September 2017 Xukuumadda usoo gudbisay Gollaha Shacabka.
Wuxuu sheegay in NISA 1972 lagu dhisay si aan sharci ahayn. Sababta uu Fahad Yaasiin hadda u diiday sharcigan in la meel-mariyo ayaa ah inay ku jiraan qodobo dhigayo in hay'adda la horgeeyo Baarlamaanka, oo dib loogu laabto sharciyadda ay ku dhisan tahay.
"Ma jirto sharci uu ogyahay Baarlamaanka oo ku dhisan tahay, kuna shaqeynayso NISA," ayuu hadalkiisa ku daray Xildhibaanka, wuxuuna ku baaqay in lala xisaabtamo Fahad Yaasiin, maadaama uu jebinayo xeerarka iyo dastuurka dalka.
0 Comments Topics: fahad yasiin gollaha shacabka nisa
Fowdo ka socoto Xarunta Baarlamaanka Soomaaliya
Warar 6 February 2021 13:30